Askariyad Mareykan: Waxaan jeclaan lahaa in aan anigu noqdo ruuxa la dilay, weligay kuma… – Hagaag.com
Askariyad Mareykan: Waxaan jeclaan lahaa in aan anigu noqdo ruuxa la dilay, weligay kuma…
Posted on 28 Seteembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Amber Guyger (31-jir) oo ah askariyad loo haysto dilka nin madow ah oo daris la ahaa kaas oo ay gurigiisa ku dhex dishay xilli ay ku khaldantay gurigiisa oo ay u qaadatay in ninkani uu yahay tuug gurigeeda ku dhex jira.
Dhacdadan oo ka dhacday magaalada Dallas, Texas ee dalka Mareykanka dhammaadkii sannadka 2018 ayaa hadalhayn badan dhalisay, waxaana loo fasiray in haweeneydan ay cunsurinimo u dishay ninkan madow oo lagu magacaabay Botham Jean islamarkaana jiray da’da 26.
Maxakamad lasoo taagay ayay ka sheegtay in ay aad uga xuntahay dhacdadan, eyna ka jeclaan laheyd in iyada la dilo.
Waxaa lagu eedeeyay dil bareer ah, haddii lagu helo dambigan waxaa ay muteysaneysaa xabsi daa’im oo nolosheeda ah.
” Waxaan jeclaan lahaa in aan aniga noqdo ruuxa la dilay. Waligay kuma fekerin in aan gooyo naf ruux aan dambi laheyn, arintanna wax shaqo ah kuma lahan naceyb ama cunsuriyad. Waxaan ahaa qof cabsanayay, habeenkaas” , ayay tiri askariyadda oo oyneysa.
Habeenkii ay dilka geysaneysay ayaa la sheegay in ay kasoo baxday shaqo boolisnimo oo ay 13 saacadood ku jirtay.
Waxa ay maxkamadda ka sheegtay in labada guri ay isku egyihiin islamarkaana markii ay furaha galisay albaabka, uuba iska furmay maadaama uusan si wanaagsan u xirneyn, waxaana ay markaasi u qaadatay in gurigeeda tuug jabsaday, sidaasna ay bastoolada kula soo baxday una toogatay Botham.